Izitayela ezimnyama nezimhlophe zokwamukela isimo sezulu esihle | Bezzia
Izitayela ezimnyama nezimhlophe zokwamukela isimo sezulu esihle
UMaria vazquez | 10/05/2021 18:00 | Ngigqokani
Sithanda ukuthi isizini ngayinye ikukhuthaze ukuthi udale izingubo ezimnyama nezimhlophe, inhlanganisela engaqondi izinkathi, izitayela noma imfashini. Inhlanganisela yokuwina okulula kakhulu ukudala inhlanganisela ekhangayo.
I-tandem emnyama nomhlophe ihlala ifanelekile, ngisho nasezenzakalweni ezinhle kakhulu; Inqobo nje uma ilebula lingasho okunye, kunjalo. Izinhlobonhlobo zezingubo esizithola kule mibala zenza kube lula ngathi ukuthi sakhe izingubo kokubili okuyisisekelo nokujwayela.
Ufuna ukubukeka komgwaqo nomnyama nomhlophe? Kunezicucu ezenza kube lula ngathi ukuthi sakhe inhlanganisela eguquguqukayo, okulula ukuzivumelanisa nezimo ezahlukahlukene usuku lonke. Isudi emnyamaIsibonelo, kufanelekile ukudala ukubukeka kobuchwepheshe. Kepha hhayi kulezi zimo kuphela lapho uzokwazi ukusizakala khona.
Kuhlanganiswe nesikibha esimhlophe, isudi iba yisinqumo esihle sokujabulela impilo yethu yansuku zonke. Ngaphezu kwalokho, singasebenzisa ngokunenzuzo i- ngasinye sezingcezu zayo ngokwehlukana ukudala izingubo ezingavamile. Gqoka ijakhethi emnyama phezu kwejini emhlophe bese uhlanganisa amabhulukwe nejezi elinemigqa, ukuze unikeze izibonelo ezimbalwa.
AmaJean noma ama-chinos nawo angakhetha kahle ngalesi sikhathi sonyaka. Khetha amamodeli ayisisekelo uwahlanganise neziqongo eziphikisanayo ezengeza ukuthinta kwempahla yakho. Ungasebenzisa imikhono ekhukhumele, imifekethiso, noma imibhalo yesimfashini ukukwenza.
Ngikhuluma ngamaphrinta anemfashini ... imidwebo yeVichy Bayasivumela ukuthi sibulale izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa kule sizini. Leli phethini liwumkhuba ngakho-ke izingubo ezimnyama nezimhlophe ezinephethini ziningi. Iya kwengubo yesitayela sezwe, i-jumpsuit noma i-blouse ehlanganiswe namabhulukwe amhlophe. Futhi uma imidwebo akuyona into yakho, hamba ubheke amachashazi akudala, ama-polka noma amachashazi we-polka.
Uyazithanda izingubo ezimnyama nezimhlophe noma ukhetha umbala?
Izithombe - @simphiwe, @nomfundoj, @lanakashu, @sbahle_mpisane, @sbahle_mpisane, @nokuthula, USarah Christine, @sbahle_mpisane
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ngigqokani » Izitayela ezimnyama nezimhlophe zokwamukela isimo sezulu esihle
Ungangeza kanjani amaphethini kumhlobiso
Imibono emi-5 yokudla kwakusihlwa ukuze ulale kangcono